अमेरिकामा नेपाली चेलीको हत्या
वाशिङ्टन । अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यमा भएको गोली काण्डमा एक नेपाली चेलीको हत्या भएको छ भने अर्का एक नेपाली घाइते भएका छन् । एक कम्पनीमा नै अल्पत्कालीन काम गर्ने २६ वर्षीया
अभिनेत्री नै बलात्कृत
काठमाडौं । राजस्थानको अलवरमा एक २२ वर्षीया अभिनेत्री बलात्कृत भएकी छिन् । अभिनेत्रीले आफुलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवाबिरुद्ध मुद्धा दर्ता गराएकी छिन् । ‘उसले मलाई घुमाउने बहानामा नीमराणा लग्यो
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल घाना प्रस्थान
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल घाना प्रस्थान गर्नुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल ‘पान अफ्रिकन सम्मेलन’मा भाग लिन मंगलबार राति त्यसतर्फ जानुभएको हो । समाजवादी
चीन । चीनको भ्रमणमा रहनुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख (मन्त्री) सोङ ताओबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ । चिनियाँ क्रान्तिको ऐतिहासिक
अर्पण मगर क्वालालम्पुर । आइतबार साँझ विषालु मदिरा सेवनपछि मृत्यु भएका ७ नेपालीमध्ये पाँचको परिचय खुलेको छ । विषालु मदरा सेवनबाट ७ नेपालीसहित १५ को मृत्यु भएको छ । अस्पतालमा
विषालु मदिरा पिउँदा मलेसियामा ७ नेपालीको मृत्यु
अर्पण मगर ‘बुद्ध’ क्वालालम्पुर । विषाक्त रक्सी पिउँदा मलेसियामा सात नेपालीसहित १५ जनाको ज्यान गएको छ । ज्यान गुमाउनेमाहरुमा भारतीय, बंगलादेशी र एक मलेसियन नागरिक छन् । २२ जना बिरामी
‘चिनिया क्रान्ति संसारकै कम्युनिष्टलाई प्रेरणा’
चीन । चीन भ्रमणमा रहनुभएका चीन भ्रमणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सान्सी प्रान्तिय कमिटीका स्थायी समिति सदस्य तथा येनान नगर कमिटीका सेक्रेटरी सु सिन्रोङ्गसँग छलफल गर्नुभएको
कांग्रेसका कार्यकर्ताले बाबुराम र नेपालीको मन दुखाए !
अमेरिका । एक महिना लामो अमेरिका भ्रमणमा रहेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अमेरिकामा पाँच नेपालीले कालो झण्डा देखाए, हत्यारा भने, नेपाल फर्क भने । डिसी
बाबुराम भट्टराईलाई अमेरिकामा कालोझण्डा(भिडियाेसहित)
काठमाडौ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजनक डा. बाबुराम भट्टराईलाई अमेरिका नेपालीले कालोझण्डा देखाएका छन् । पूर्व प्रधानम्न्त्री डा भट्टराई समाजवाद र साम्यवादको विविध पक्ष अध्ययन गर्ने उदेश्यले
बैतडी । सडक दुर्घटनामा परी मलेसियामा आज एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बझाङ्ग केदारस्युँ गाउँपालिका– ५ बाँझका ३० वर्षीय मानबहादुर बोहोरा छन् । कोठाबाट कामका लागि कम्पनीतिर